Esi ewepu ndanda ndammana na-enweghị ụmụ ahụhụ. - AHUIKE KWURU MAG - TELES Relay
Esi ewepu ndanda ndammana na-enweghị ụmụ ahụhụ. - AHUIKE tinye MAG
By TELES RELAY	 On June 15, 2021
Otutu ihe ojoo nwere ike igbochi nkasi obi gi n'ulo. Na nke a, ndanda nwere ọnọdụ mbụ. Maka ezi ihe kpatara ya, ha na-achịkwa ọnụ na n'èzí ụlọ, nke na-eme ka mkpochapụ ha sie ike karị. Naturalzọ dị iche iche dị iche iche dị adị iji tufuo ya, ọbụlagodi n’ubi gị. Fọdụ n’ime ha na-aka ike ma na-egbu ndanda, ndị ọzọ na-ahapụ ha ma na-achụ ha.
Mee ka ndanda si n'ụlọ pụọ. Isi mmalite: Akwụkwọ akụkọ ụmụ nwanyị
Nke a bụ otu esi ekwu nkwụsị ndanda n'ụzọ nkịtị
1. Diatomaceous ụwa
Diatomaceous ụwa dị irè megide ndanda. Isi Iyi: 18a39.fr
Ọ bụ ụdị silica (silicon dioxide) nke nwere fosilized foduru nke aquatic ntule a na-akpọ diatoms. O na emeputa ahihia na-ata nku site n’itinye mmanu n’azu ha. Ọ bụ ihe mgbochi-ant ngwaahịa site na mma. Wụsaa ntụ ntụ na ụzọ nke ndanda iji kpochapụ ha. Agbanyeghị, zere ikuba ụwa nke ihe omimi iji zere nsogbu nke iwe.
2. Liquid efere ncha na ihe nhicha iko
Site na ijikọta ngwaahịa abụọ ahụ na karama ịgba, ị nwere ike ịchụpụ ndanda ma gbochie ha ịwakpo ogige gị. Kedu? 'Ma ọ bụ' Gịnị? Nanị site n'iwepu pheromones nke ụmụ ahụhụ ndị a pụọ n’ebe ha si gafere. Wunye ngwakọta a na ebe ụlọ nke ndanda na-eji ma ị ga-eme ka ọ gbapụ ozugbo.
3. Mmiri ncha
Thefọdụ nwere ike na-echegbu onwe ha na isi ísì nke iko. Iji mee nke a, jiri naanị ncha aka mmiri mmiri. Dị ka ngwakọta gara aga, ọ na-ewepụ ísì nke pheromones n'okporo ụzọ nke ndanda na-eji abanye n'ụlọ ma ọ bụ wakpo ogige ahụ. Mgbe ole ụmụ ahụhụ ndị a na-efunahụ ụdị pheromones niile, ha enweghị ike ịgwa ibe ha okwu, nke na-ewute ha ma na-egbochi ha ịga nke ọma.
Isi nke ose na-akpasu obere ụmụ ahụhụ na-akpụ akpụ. Ya mere, ahụhụ na-asọ ihe a na-asọ oyi. Maka ịrụ ọrụ nke ọma, ose ojii ma ọ bụ cayenne bụ ndị a tụrụ aro. Dị mma ma dị mma, ị nwere ike fesaa ose gburugburu baseboards ma ọ bụ n'azụ ngwa iji gbochie ụmụ ahụhụ ndị a n'ọnụ mmiri. Ọ bụ ihe na-eme ka ọ dị mma nke na-enye ha ohere ka a chụsasịa ha.
5. Pepemint mkpa mmanụ
Pepemint mkpa mmanụ na-ndanda na n'ọnụ mmiri. Isi Iyi: 18a39.fr
Dị ka ose, pepemint na-arụ ọrụ nke ọma iji gbochie ndanda na ọbụna anwụnta. Iji mee nke a, gbanye ntụ ntụ 10 ruo 20 nke pepemint dị mkpa mmanụ na iko iko 2 mmiri na ịgba na ịgba ngwakọta n'akụkụ niile nke ụlọ nwere ike ịchịkwa ndị nkatọ a na ọbụna akwụ akwụ. Ọ bụ ezie na mmanụ a dị mkpa bụ akụkụ nke ngwaahịa ndị sitere n'okike, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhapụ ya ka ọ ghara iru nwamba nke nwere ike imebi ahụike ha.
6. Mmanụ osisi tii
Mmanụ a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka mmanụ dị mkpa nke pepemint. Site na ịgwakọta 5-10 tụlee na iko abụọ nke mmiri na sprayer na ịgba ngwakọta a n'okporo ụzọ ahụhụ, ị ​​ga-asị ndị a na -ekele gị ruo mgbe ebighi ebi. Ndụmọdụ ọzọ: tinye bọọlụ owu na ngwaahịa a na ị ga-edebe ebe dị iche iche nke ụlọ iji gbochie ụmụ ahụhụ ndị a na-enye nsogbu. Mmanụ a dịkwa ize ndụ maka anụ ụlọ, ọ ga-adị mma ị attentiona ntị na nwamba gị ndị na-ekwesịghị itinye ya.
7. Lemọn eucalyptus mmanụ
Anụmanụ na-egbu egbu, eucalyptus mmanụ lemony site na isi nke lemongrass ọ na-agbasa, na-achụpụ ndanda, anwụnta yana ụmụ ahụhụ na-efe efe ma ọ bụ na-akpụ akpụ. Ejiri n'otu ụzọ ahụ dị ka mmanụ osisi tii, ọ na - enyere aka ịchụpụ ndanda. Aghụghọ nke bọọlụ owu na-abụkwa ihe ngwọta siri ike iji tufuo ahụhụ ndị a.
8. White mmanya
Isi nke mmanya na-acha ọcha na-eme ka ndanda pụọ. Isi Iyi: 18a39.fr
Isi nke mmanya na-acha ọcha na-achụpụ ndanda, n'ihi nke a, ị nwere ike iji ya dị ọcha ma ọ bụ gbanye ya na mmiri. Thegba ngwaahịa na anthills, n'okporo ụzọ ha na-aga ma ọ bụ ọbụna na mgbape, na-adaghachi azụ ma na-enye ohere ikpochapụ mkpokọta ndanda. Enwere ike ihicha ala na mmanya ọcha n'ihi na mgbe ihichachara, ụmụ ahụhụ ndị a nwere ike ịnụ mmanya ahụ wee laghachi n'èzí ụlọ gị.
Kedu ihe kpatara na ị gaghị ehicha mmanya na mmanya na ...
Ndụmọdụ bara ezigbo uru maka ihicha ihe ọkụ ọkụ…
Ị nwere ike ịhụ nwoke ahụ zoro ezo na onyonyo bea a? -…
9. Mmiri ọkụ
Site na ịwụsa mmiri esi mmiri n'ime ahịhịa ahụ, ọ ga-ekwe omume iwepụ ha, mana ọ bụrụ na ị ga-eme ya maka ụlọ anthill niile dị n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ubi gị.
Cornstarch ịchụpụ ndanda. Isi Iyi: 18a39.fr
Ọka ntụ nwere ike iku ume ụmụ ahụhụ. Jiri nwayọ wunye ọka ndị a n’obere ụmụ ahụhụ ndị a ma tinye mmiri n’ikpeazụ. Cruelzọ obi ọjọọ a sina dị na-eme ka o kwe omume ikpochapụ ha na nsonaazụ ya ga-adị irè nke ekwensu.
Cinnamon ịchụpụ ndanda. Isi Iyi: 18a39.fr
Cinnamon ma ọ bụ mmanụ ya dị mkpa na-achụpụ ndanda nwa na ndanda na-acha uhie uhie ma debe ha n'ọnụ mmiri. Wụsaa cinnamon na nsọtụ windo na ebe ntinye n'ụlọ gị ma ị ga-enwe ezigbo nsonaazụ. Site na itinye bọọlụ owu na paịlị dị ezigbo mkpa ma debe ha ebe ndanda na-agakarị, dị ka ihe atụ, ị na-asị ndị na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ha enwee nsogbu.
12. kọfị mgbakwasị
Ala kọfị igbochi ndanda. Isi Iyi: 18a39.fr
Ala kọfị, mgbe a na-eme ya, bụ akụkụ nke ya nke ihe ndị kacha dị egwu ichu nta ma tufuo ahụhụ a. Chịkwa ndanda bụ n'ezie adịghị mfe ọrụ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịchị niile nkuku nke ụlọ, ọbụna jakị ma ọ bụ akwukwo nri ubi. Can nwere ike tinye ya na ụzọ nke ụmụ obere anụmanụ ndị a iji gbochie ha. Nwekwara ike itinye ya n'akụkụ akụkụ ọkacha mmasị nke ụmụ ahụhụ ndị a dịka efere anụ ụlọ ma ọ bụ osisi.
Boric acid bụ nsị a na-ejikarị eme ihe oriri na ihe ngwọta shuga iji dọta ma kpochapụ ógbè ndanda, dị ka ekwuru n'ime ya. ọmụmụ. Maka nke a, ọ dị mkpa iji ya na-akpachapụ anya, ọkachasị na-eyiri uwe aka ma na-egbochi ya anụ ụlọ na ụmụaka. Iji mee nke a, naanị agwakọta ½ teaspoon nke boric acid na teaspoons 8 nke shuga na iko 1 nke mmiri keara .ara. Sook owu bọọlụ na ngwakọta a ma debe ha na ebe nke ụmụ ahụhụ ndị a. Ọ ga-ekwe omume ịhapụ ngwakọta na nnukwu efere a na-ekpofu ya ma ọ bụ akpa ma na-arata ndanda dị ka ọnyà iji wepụ ha.
Dị ka boric acid, borax dị egwu maka ikpochapụ ihe niile ndanda. Gwakọta borax na shuga ma ọ bụ ọbụna syrup maple ma ọ bụ syrup ọka yana mmiri ma gaa n'ihu n'otu ụzọ ahụ yana boric acid.
15. Lelee osisi
Ndanda nwere ike iju osisi. Isi Iyi: gardening.lemonde
Y’oburu na ihu otutu ndanda na elu osisi gi, oputara na ha juputara. Bibie ha ozugbo ma gbakwunye ndị ọzọ na lemon ma ọ bụ oroma citrus bee iji chebe ha.
Esi gbochie ndanda infestation
Ọrụ a tara akpụ na-amalite site n’ibibi ebe nile e si enweta ihe oriri. Iji mee nke a, ọ dị mkpa zere ịhapụ nri na irighiri nri na kichin gị ma ọ bụ n'ime ụlọ iri nri. A ga-emechi nri dị ụtọ, nriuko, mmanụ a orụ ma ọ bụ ọbụnadị ọka n’ime akpa rọba. O kwesịkwara ịbụ lelee iberibe n'okpuru ma ọ bụ gburugburu ngwa kichin gị, sofas, ahịhịa na ebe ọ bụla enwere ike ịfọ nri n’ụlọ.
Leziekwa anya maka oghere ha nwere ike ịbanye, dịka mgbawa na mgbidi ma ọ bụ oghere n'azụ radiator.
Ndị mkparị a na-eme mkparị adịghị mfe mgbe niile. Ndị na-emegharị anụ arụ nwere ike inyere gị aka rụọ ọrụ a siri ike ma sie ike. Chọta n’etiti ụzọ ndị a nke ga-adabara gị na nke na-aga ịchụ nta anụ ọhịa ndị a.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/comment-elimin-les-fourmis-naturellement-sans-insecticides/
TELES RELAY 56314 posts 1 comments
Ọnụ na-ekwuchitere MRC na-arịọ ndị nyere onyinye na ndị ọrụ afọ ofufo ka ha ghara ịdọpụ uche ha
Makenzy Orcel na Jean d'Amérique, ụmụ ugwu mgbawa nke akwụkwọ Haiti - Jeune Afrique
Kedu ihe kpatara na ị gaghị ehicha akwa na mmanya na soda ...
Ndụmọdụ bara ezigbo uru maka ihicha ọkụ ọkụ ọkụ gas - SANTE…
Ị nwere ike ịhụ nwoke ahụ zoro ezo na onyonyo bea a? - MAKA EZIOKWU EGO
Akwụkwọ, ị ga, pepụ .. ka esi eji akụkụ akwụkwọ nri "abaghị uru"? ...